swiiti anwụrụ 1532 - Egwuregwu swiiti anwụrụ - Free Ndụ Ndụ Atụmatụ Ndị na-egosi
Ị nọ ebe a: Ulo / Uncategorized / swiiti anwụrụ 1532
Last updated on Julaị 16, 2021 Site na Isobella Franks Leave a Comment
Kedu otu ị ga-esi tụọ ihe ịga nke ọma n'ụwa taa? Ọ dị mma, ọ bụ ihe dị mfe mmadụ na-eme nke ọma ma ọ bụrụ na ọ mezue ọrụ dị mgbagwoju anya na-enweghị nchegbu. Ga-eche ọtụtụ ọnọdụ nwere ihe mgbagwoju anya ihu. You ga-enyefe? Ọ bụrụ na i mee, mgbe ahụ ị nweghị ike ịnụ ụtọ ụtọ nke ihe ịga nke ọma. Nke a bụ ebe egwuregwu swiiti na-etipịa gị. Ọ na-ewetara gị ọrụ ndị siri ike ma gwa gị ka ị mezue ha n'oge ekwupụta.
You gaghị enwe ike mezue ọrụ niile ahụ n'efu. Ga-achọ ụfọdụ nduzi ma ọ bụrụ na ọ rapaara merụsịrị. Anyị anụwo ka ndị mmadụ na-araparakarị na swiiti anwụrụ 1532 larịị. N'ihi ya, ọ chọrọ usoro dị iche iche iji merie ya, dị ka ọ bụ ihe siri ike. Anyị ga-enyere gị aka na nke a ka ị na-enye ụfọdụ ndụmọdụ na usoro metụtara swiiti anwụrụ 1532 larịị.
Kwa ọkwa swiit niile nwere ihe mgbaru ọsọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iti ọkwa ahụ, ị ghaghị imezu ihe mgbaru ọsọ ahụ. Na swiiti anwụrụ 1532 ebumnuche ya bụ ịnakọta 1 hazelnut na 1 cherị. N'otu oge ahụ, ị ga-anakọta 75000 isi. Ọzọkwa, 20 aga ma obu obere kwesiri iwere ihe a. Na mkpokọta enwere 5 candies na 59 oghere dị. Have ga-eme atụmatụ ihe ị na-eme.
swiiti anwụrụ 1532 Atụmatụ na usoro
Ajụjụ a na-anọgide na-abụ otu esi agakwuru swiiti anwụrụ? Ọ bụrụ na ụzọ gị adịghị mma site na mbido, ị ga-arapara n'oge ụfọdụ. Iji malite, ị ga-Akpara gị mbụ Nkea na-akpali ya iji wuchaa a larịị.
Firstly, ị kwesịrị ị na-eweta kwekọrọ ekwekọ agba candies na ala n'aka nri akuku. Malite ịkwadebe swiiti na-ekpo ọkụ iji kpochapụ candies agba agba a.
Ekwela ka ihe ndị ahụ pụọ na ebufe ka ha ga-alọghachi na egwuregwu ahụ. N'ihi, mmegharị gị ga-efu
Mgbe ọ bụla ị ga-anwa ịkụpịa candies ndị ahụ, ọ ga-aga n’aka nri ha. Anyị aro ga-eme ka candies pụrụ iche kama ịkwanye ihe mgwa niile. Ọkwa a chọrọ ka ịmepụta ụzọ ọpụpụ. Ọzọkwa, mgwa a gafere na teleporter na-ewepụ ya na egwuregwu dị n'aka nri ala.
Ihe ọ bụla na-ebu eriri dị n'aka nri. Otú ọ dị, ihe obula obula ma oburu na eweghachitere ga abanye na akuku aka ekpe. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị laghachịa, mmegharị gị ga-efu.
Ọ bụrụ na izipu ihe ndị a, ị ga-enweta 20,000 isi. Nke a na otu akụkụ nke lekwasịrị anya.
Nke a bụ otu ị ga-esi bịaruo egwuregwu a. Ọ chọrọ ezi nhazi. Ọ bụrụ na ịmaliteghị nke ọma na mbido ị ga-akwụsị ịkọ nkata. Ọzọkwa, gbalịsie ike hụ na mmegharị gị agaghị efu. Ekwesiri iji ihe obula eme ihe nke oma dika odi oke onu ahia. Ọ bụrụ n ’ibugharị n’uche atụmatụ ahụ n’ikpeazụ ị ga - emeri n’ọkwa a. Naanị cheta ihe mgbaru ọsọ njedebe ma hụ na ị na-agagharị.